Mishonga yemakwenzi vagadziri & vatengesi - China Mishonga yemakwenzi fekitori
Shumba Mane Hericium Erinaceus Bvisa Polysaccharides Powder
Iyo yakanaka kugaya uye inogona kushandiswa seinosimudzira. Hericium erinaceus inogona kusimbisa nhengo, uye kuporesa chisingaperi gastricism, duodenum ulcer uye zvimwe zvirwere zvinopinda. Izvo zvakare zvinogona kuvandudza immune immune system.
Yakashandisa mudzi se aphrodisiac pasi pemazera uye kuwedzera iyo yakazara bonde dhiraivha yevarume nevakadzi, uye kuti inogona zvakare kubatsira kuvandudza urume hunhu mune varume. kukwanisa kushanda pamwe chete nemasikirwo emuviri mabasa ekudzorera masimba ezvirwere kumwero wakarurama, anokwanisa kupa bo
100% Natural Siberian Ginseng Bvisa chirimwa chinotora poda pe
Eleutherococcus senticosus imhando yesango diki, rine huni mumhuri yeAraliaceae yekuNortheastern Asia. Mumushonga wechiChinese inozivikanwa se. Inowanzodaidzwa kuti eleuthero, uye yakambotengeswa muUnited States seSiberia Ginseng sezvo iine mishonga yemakwenzi yakafanana neiya
100% Zvisikwa Garlic Bvisa Allicin Powder 1% CAS Nha. 599-86-6
1.Kubatsira kudzivirira kubva kuchirwere chemwoyo nekurohwa.2. Inoderedza cholesterol yako uye ine antibacterial properties; 3. Inokanganisa kurwisa zvirwere uye hutachiona;
mishonga yemishonga yakareba yebonde okra yakachena dhizaini nemakwikwi mutengo
Okra (inozivikanwawo segumbo), inokura-inoreba, inodziya-mwaka, mwaka wemiriwo kubva kumhuri imwechete sehollyhock, rose reSharon uye hibiscus. Mapods asina kusimira anoshandiswa kuita masobho, canning uye stews kana semuriwo wakakangwa kana wakabikwa.